सुदूरपश्चिममा औद्योगिक वातावरण बन्दै : विमानस्थल र जलविद्युतमा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर सुदूरपश्चिममा औद्योगिक वातावरण बन्दै : विमानस्थल र जलविद्युतमा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:२९ मुख्य खबर, समाचार
धनगढी । उद्योगधन्दामा लामो समयदेखि पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको छ । स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी लगानीकर्ता समेत आकर्षित हुन थालेका छन् भने प्रदेश सरकार दुई ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको तयारीमा लागेको छ ।
केही समयअघि संघीय सरकारले काठमाडौंमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा यस प्रदेशबाट माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् (४० मेगावाट), पश्चिम सेती जलविद्युत् (७५० मेगावाट), पश्चिम सेती तथा एसआर सिक्स संयुक्त जलविद्युत् (१२०० मेगावाट), धनगढी क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना गोदावरी तथा सुदूरपश्चिम परिवहन परियोजना गरी ६ ओटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । तीमध्ये धनगढी विमानस्थल निर्माणका लागि दुईओटा र पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि एउटा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय लगानी आउनुले स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्ने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर बताउँछन् ।
यसैबीच, आईएमई गू्रपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले चिसापानी–राजकाँडा केबलकार निर्माणका लागि लगानी गरेका छन् । जाल्पादेवी केबलकारको नामबाट सञ्चालनमा आउने यस परियोजनाको लागत २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसमा ढकालको ६० तथा स्थानीय बासिन्दाको ४० प्रतिशत अंश रहने जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
यस्तै, दार्चुलामा सीसा खानीको उत्खनन गरिँदैछ । टोरेक्स प्रालि अन्तर्गत १० जनाको रू. १० करोड लगानीमा नेपालमै पहिलो पटक सिसा खानी उत्खनन हुन लागेको हो । यहाँबाट दैनिक १५ टन कच्चा पदार्थ उत्पादन गरी भारत निर्यात गरिने सञ्चालक प्रेम धामीले बताए ।
सुदूरपश्चिमले जलविद्युत्को उच्च सम्भावना बोकेको छ र यसमा पनि निजीक्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ ।
दार्चुला र बझाङमा मात्र जलविद्युत्मा १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र बझाङको ६४ मेगावाटको कालागाड जलविद्युत् आयोजना यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट सबैभन्दा ठूलो लगानीको आयोजना भएको जलविद्युत्का जानकार वीरेन्द्र मल्लको भनाइ छ ।
कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र जडीबुटी नै प्रदेशका प्रमुख लगानीयोग्य क्षेत्र हुन् । प्रदेश सरकार औद्योगिक वातावरण बनाउन लागिपरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए । कैलालीको डुँडेझाडी र कञ्चनपुरको दैजीछेलामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए । यसनिम्ति डुँडेझाडीमा १ हजार १०० बिगाहा र दैजी–छेलामा ९०० बिगाहा जमीन छुट्याइसकिएको र सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि २७५ आवेदन परेको बोहराले जानकारी दिए ।
यस क्षेत्रका व्यवसायीले कैलाली र कञ्चनपुरमा दर्जनौंको संख्यामा ठूला उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । करीब २ अर्ब लगानीमा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा चिनी मिल तथा बेलौरीमा महाकाली सुगर मिल सञ्चालित छन् । पोल्ट्री व्यवसायमा मात्रै यो क्षेत्रमा झण्डै रू. १० अर्ब लगानी भएको छ । भीएच ह्याचरी उद्योग मध्य तथा सुदूरपश्चिमकै ठूलो लगानीको उद्योग भएको प्रबन्ध निर्देशक विवेक भट्टले बताए । कैलालीमा बिस्कुट, पाइप, तेल, ग्यास, साबुन, दाना तथा मैदा उद्योगहरूमा अर्बौं लगानी पुगिसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटीले जानकारी दिए । २ वर्षअघि देशका ठूला लगानीकर्तालाई लक्षित गरी धनगढीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिए पनि प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी आउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : अबको बजेट ३० अर्ब, राजधानी र औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिकतामा, चालू आवको खर्च १५%
२१ बैशाख २०७६, शनिबार १६:२१